Nepali Rajneeti | कमिसन नमिलेर खोप रोकिनु लाजमर्दो : कोइराला
कमिसन नमिलेर खोप रोकिनु लाजमर्दो : कोइराला
बैसाख २३, २०७८ बिहिबार १६२ पटक हेरिएको
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कमिसन नमिलेर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोप रोकेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन्।
नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट व्यवसायीहरु विजय दुगट र ऋतु वैद्यले कमिसन नमिलेकै कारण कोरोना भ्याक्सिन रोकेको भन्ने खबरले लज्जित बनाएको समेत बताएका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्- ‘कमिसन नमिलेकै कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट व्यवसायीहरु विजय दुगड र ऋतु वैद्यले कोरोना भ्याक्सिन रोकेको भन्ने खबरले लज्जित बनाएको छ।
महामारीको कहालिलाग्दो समयमा जनतामाथि यति ठूलो धोका? पहिलो चरणको महामारीका समयमा ठुलो आर्थिक चलखेल गरी प्रधानमन्त्री निकट ‌ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिइएको थियो।
देश र जनता कोरोना संक्रमणको महामारीमा रहेको समयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीकै छत्रछायाँमा रहेका व्यवसायीहरुले जनस्वास्थमाथि गरेको यति ठूलो अपराध र बेइमानी कदापि क्षम्य हुन सक्दैन। यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ र समयम आएपछि जनताले यसको हिसाब गर्नेछन्।’